Samsung melite Galaxy Buds na ọrụ nke Buds + | Gam akporosis
Samsung emelitere Galaxy Buds na ụfọdụ atụmatụ ndị mere na nke abụọ Galaxy Buds +. Ọ bụ awa ole na ole gara aga ka ndị nwe ụdị mbụ nke Buds natara mmelite a.
E nwere ihe atọ dị mkpa ọhụrụ, otu nke ga-ekwe omume iji arụmọrụ nke Microsoft Swift Pair maka ahụmịhe mmakọ kacha mma na Windows 10 PC; Anyị amatalarị nnukwu mmasị nke Samsung na Microsoft na-eme ka ngwaọrụ ha na ngwanrọ na-aga nke ọma.
Ihe kachasị mkpa bụ Microsoft Swift Pair, atụmatụ nke anyị nwere na Windows 10 kemgbe ntọala> Ngwaọrụ Bluetooth na n’okpuru ngwaọrụ ndị anyị jikọtara ọnụ; ọ na-abụkarị na ndabara.
Y’oburu Windows 10 site na mbipute 1803, ị ga-enwe ike iji Galaxy Buds na ọrụ ọrụ kwa ụbọchị dị ka oku vidiyo ma ọ bụ ịge egwu. Nke ahụ bụ, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ahụmihe n’etiti ekwentị mkpanaaka na PC.
Ihe ohuru bu oru nke Ambient Sound na-abịa site Buds +. Ọ bụ kpọmkwem ihe megidere mkpọtụ mkpọtụ. Nke ahụ bụ, ị ga-enwe ike ị atta ntị na ihe na-eme gburugburu gị mgbe ị nwere njikọ Buds. N'ezie, ọrụ a dịkwa maka naanị na ị nwere otu n'ime ekweisi.
Nke atọ kachasị ọhụrụ bụ Spotify mwekota na Galaxy Buds. Ugbu a site na ogologo pịa na otu n'ime ha ị nwere ike rụọ ọrụ Spotify. Site na Galaxy Wear ntọala ị nwere ike hazie nhọrọ a ka ọ rụọ ọrụ ma malite ngwa egwu egwu kachasị amasị gị.
una dị jụụ na nnukwu mmelite iji mee ka Samsung Buds mbụ Buds dị ndụ nakwa na ha nwere onyinye n'oge ha na Galaxy S10; adịghị uche na aghụghọ kachasị mma anyị na-akụziri gị na vidiyo a nke Galaxy Buds na Galaxy Note10 +.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Akpa Galaxy Buds na-emelite na-enweta njirimara nke Buds +